Famatsiam-bola fanariana fampiasam-bola, fanariana vy fampiasam-bola - Yungong
Ny endri-javatra misy ny mixer vakumay dia mifototra amin'ny fenitra iraisam-pirenena sy ny fampifangaroana ireo toetra mampiavaka ny indostrian'ny fikarakarana sakafo malaky be.
Araka ny ilainao
safidio ny vokatra tianao indrindra
Ny vokatra dia ampiharina amin'ny valves pumping impellers fittings,
ampahany amin'ny fiara, masinina sakafo, kojakoja milina mineraly, vokatra fitaovana enti-mandeha ary haingon-trano vy.
Paompy paompy sy valve ...
Fantson-kazo plastika sy Sodina ...
Cast vy noza
Fantsona fanodinana vy ...
Fampiharana amin'ny: Impeller ...
OEM Mining ...
Casting fampiasam-bola ampiasaina amin'ny ...
Fitaovana fitsaboana Ca ...
Izy ireo dia singa sarotra ...
Afaka manome famatsiam-bola c ...
Fanariana fitaovana ...
Fitaovana haingon-by: ...
Fametrahana mazava ho azy ...
Fitaovana masinina sakafo —— packi ...
Ny singa rehetra dia ...
Tombony azo avy amin'ny fametrahana mazava tsara ...
Tube Diversion vy
Pump Valve Coupling haingana
Ny orinasa dia miompana amin'ny famolavolana marina sy ny famokarana masinina sakafo. Ny fizotry ny famatsiam-bola dia ny silicon sol, miaraka amina fivoahana manodidina ny 3000 taonina isan-taona.
Inona avy ireo anton-javatra mety hisy fiatraikany amin'ny kalitaon'ny casting ho an'ny mpanamboatra vy?
Mey / 06/2021
Ny kalitaon'ny casting dia misy fiatraikany lehibe amin'ny fitaovana mekanika, toy ny mpanentana paompy isan-karazany, ny haben'ny lavaka anatiny amin'ny faritra hydraulic, ny akorandriaka voahodina, ny maha-marina ny tsipika famolavolana ary ny fahasarotan'ny tarehiny, sns. Hisy ny olana ...
Ireo mpamokatra famolavolana precision dia manazava amin'ny antsipiriany ny fizotran'ny casting silica sol!
Ny fizotran'ny fanodinana famatsiam-bola ankehitriny dia mivoatra haingana, ary malaza izy io noho ny fisehoany tsara sy madio. Araka ny fironana ankehitriny, ireo vokatra vokatra novokarin'ny fanoratana mazava tsara amin'ny ho avy dia hihamaro hatrany. ...
Dingana manan-danja sasany amin'ny fizotran'ny fanariana amin'ny casting marina!
Ny fanodinana famaritana dia dingana fanariana mahazatra any amin'ireo mpanamboatra fanariana vy, fa ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao dia tsy dia mahazatra toy ny fanariana vy sy vy, fa ny fanariana marina dia mety hahazo endrika marina sy mazava tsara. Arakaraka ny comm ...
Prospect ny indostrian'ny vy any amin'ny faritry ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny faritany Hebei
Mba hiezahana hanokatra toe-javatra vaovao fampandrosoana avo lenta ny indostria fanorenan-trano any amin'ny distrikanay, ny 24 martsa lasa teo, ny vondrona mpitarika ny distrikanay dia nanadihady momba ny fikambanan'ny indostria mifandraika amin'izany, ny andrimpanjakana fikarohana, ny orinasa mpamokatra vy. .
Toro lalana fototra momba ny fanadiovana tsara ny JR-D120 Grinder hena totoina
Jr-d120 dia fitaovana malaza, fa isaky ny mitandrina hena manta ianao dia ilaina ny manadio mba hisorohana ny bakteria sy ny bakteria amin'ny residues. Na izany aza, ny fanadiovana ny grinder anao dia tsy misy tsy itovizany amin'ny fanadiovana vata fahandro hafa. Aorian'izany, ny fitahirizana araka ny tokony ho izy ireo singa ao aminy dia hanampy amin'ny fitazonana tsara ...